Iko MacBook nyowani iri rig yemabasa anodikanwa? | Ndinobva mac
Javier Porcar | | dzakawanda
Tinogona kutaura kuti, mune yekupedzisira Apple Keynote yakaitirwa pamhemberero yekuvhura kweWWDC 2017, haina kutisiya tisina hanya nezvikonzero zvakawanda. Imwe yacho ndeyekujekesa iyo yekuvandudza yemamwe ese Mac makomputa, sechiratidzo chisina kujeka chekuzvipira kwekambani kuMac makomputa uye zvakanyanya kupa chigadzirwa kune yega mhando yemushandisi. Zvakanaka, wese mushandisi weMac ane zvimwe zvaanoda uye kuve neMac iri padhuze nezvido zvedu sezvinobvira zvingave zvakakwana (ini ndinoisiya pane runyorwa rweApple rwemazano).
Kune ruzhinji ruzhinji, izvo zvinodiwa nebasa ndezvekuti: kuverenga email, mapeji, webhu, masocial network, shanduko yefaira, vhidhiyo kana pikicha, kuti uishandise mugwaro. Nezvinodiwa izvi, kana zviri zvakare kugadzikana kuve neinotakurika, isingaremi uye inoyevedza dhizaini, yedu michina ndeye MacBook. Icho chidimbu chakakwana chemidziyo uye godo revashandisi vazhinji vemalaptop.
Zvino, tinogona here kukumbira iwe chimwe chinhu? Parizvino, edu MacBook anokwira Intel's dual-core m3 chip, kungave nemidziyo dhizaini kana Hardware kugona. Neiyi processor, kuita yakaoma foto kana vhidhiyo yekugadzirisa mabasa ibasa rakaoma.
Apple inoziva kuti aya makomputa ari kubudirira mukutengesa, sezvaive Macbook Air panguva iyoyo. Saka, pese pazvinogoneka, wadii kukwidziridza MacBook yako? Zvakanaka kubva zvino zvichienda mberi tinogona kuve neMacBook ine i5 uye kunyangwe i7. Muchiitiko cheiyo i5 processor, Apple ine yakagadzirirwa preset, hongu tichafanirwa kubhadhara mazana matatu ema euro pane yakajairwa vhezheni neyedu inozivikanwa m3. Tine 5 GHz mbiri-musimboti Intel Core i1,3, ine Turbo Boost inosvika ku3,2 GHz, zvakare mune ino kesi, iyo SSD ndangariro ndeye 512GB, ichienzaniswa ne256 GB yekutanga vhezheni.
Kana tichida mamwe maficha, Apple inokutendera iwe, mushure mekugadzirisa michina, kuisa ichi chishandiso ne7 GHz i1,3. kufefetedza kukuru, bhatiri (zvine mutsindo zvine chekuita nekushandisa) uye nemamwe RAM module.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Iko MacBook nyowani iri rig yemabasa anodikanwa?
Muturikiri Wazvino uno ndeimwe yemashandisirwo akanakisa ekushandurira mune mimwe mitauro